चारवटी श्रीमती पाल्ने लेखापालको दु:ख – ‘पिंडा छ हजुर पिंडा ।’ « Gajureal
चारवटी श्रीमती पाल्ने लेखापालको दु:ख – ‘पिंडा छ हजुर पिंडा ।’
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०७६, आईतवार ०४:३१
यातायात ब्यबस्था कार्यालयका ले, खा र पाल सुरेश अछिकारीले अकुत सम्पति कमाएको अख्तियारको ठहर छ । उनले करिव २५ बर्षे नोकरी अवधिमा बैधानिक रुपमा ८८ लाख बराबरको सम्पति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएको र बाँकी ५ करोडको हिसाब किताब नखुलेपछि उनि बिरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उनले भ्रष्टाचार किन गरे होलान् ? भन्ने बिषयमा हामीले मनु-सन्धान गरेका छौं । पहिलो कुरा, उनको थर र पदले नै उनलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्यो भन्ने हाम्रो भनुमान छ । उनी अधिकारी भएकोले आफुलाई सम्पुर्ण अधिकारको अधिपती ठानेछन् !
‘लेखापाल’ शब्दको नयाँ अर्थ र जिम्मा यसरी बुझेछन् – ‘ले’ भनेको ल्याउने, ‘खा’ भनेको खाने/ख्वाउने र ‘पाल’ भनेको पाल्ने र पालिने भन्ने ठानेछन् !
ले- ल्याउने के त ? जसरी भए पनि पैसा ल्याउने । महिनामा तलब खाएर ल्याउने । दलाललाई मिलाएर ल्याइने । विचौलीयाकोमा धाएर ल्याउने । ग्राहकलाई धम्क्याएर ल्याउने । समस्यालाई गाँठो पारेरै ल्याउने । समस्या अड्क्याएर ल्याउने । सम्भावना भड्काएर भड ल्याउने ।
यिनले ल्याउने पैसामात्र होइन, श्रीमतिहरु पनि हो । बिहे गरेर घरवाली ल्याउने । जिस्किंदा जिस्किंदै साली ल्याउने । हिस्सी देख्यो कि काली ल्याउने । धन र मनकी दिलवाली ल्याउने ! श्रीमति चाहियो जोरका जोर । घरलाई बनाएछन बाख्राको खोर !
खा- आफैले मस्तीसँग खाने । बाहिर खाने, घरमा खाने ।गाउँमा खाने, शहरमा खाने ! उड्ने खाने, गुड्ने खाने ! झाँनेको खाने, तारेको खाने । सिलबन्दी खाने, घरमै पारेको खाने आफू खाने, अरुलाई खुवाउने । घरकीलाई खुवाउने,परकीलाई खुवाउने ! जेठी, माईली, साहिली र कान्छीलाई खुवाउने !
खाए कतिकति, खुवाएर सके जति ! बुढीलाई रिझाए भुँडीलाई भिजाए ! पार्टनरलाई खुवाए, चाट्नरलाई खुवाए ! अगुवा, पछुवा, बिचौलियालाई बाँडेर खुवाए । गलगिद्ध भुँडी भरेरै खाए !
नभनि खाए, भनेर खाए । जनताका पैसा गनेरै खाए ! टेवल माथिबाट खाए, टेबल मुनिबाट खाए ! नखाउ भन्ने टिप्पणी गर्नेलाई हकारेर खाए, इलित्त हुन्जेल डकारेरै खाए !
‘पाल’- उनले आफ्नै भुँडी सुखले पाले, चारवटी बुढी ढुक्कले पाले ! गाडीको बाटोमा गुडाएर पाले, चिलगाडीमाथि उडाएरै पाले ! लुटको धन फुपु श्राद्ध,मनको ढोका खोलेरै पाले । शाखा सन्तान पाले, घरका बाहेक परका समेत पाले !
कार्टुन चित्र:साभार सामाजिक सन्जाल